ससुरालीले अपमान गरेकाे भन्दै आफ्नै छ जना परिवार मार्ने यी कस्ता ज्वाइँ? – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > ससुरालीले अपमान गरेकाे भन्दै आफ्नै छ जना परिवार मार्ने यी कस्ता ज्वाइँ?
admin January 3, 2019 अन्तराष्ट्रिय	0
बैंकक: थाइल्यान्डमा एक व्यक्तिले आफ्ना ससुराली खलकद्वारा अपमानित भएको महशुसपछि आफ्ना बच्चाहरुसहित परिवारका ६ सदस्यको हत्या गरेका छन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । उक्त हत्याकाण्ड नयाँ वर्षको इभ मनाउने क्रममा भएको हो । उनले आफ्ना दुई बच्चा लगायत ६ सदस्यको गोली हानी हत्या गरेको र आफैँलाई पनि गोली हानेका थिए ।
ती व्यक्तिको पहिचान सुसिप सोर्सग् भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । घटनाका बेला उनी मादक पदार्थले अत्याधिक मातेका थिए। उनले आफ्नो ९ वर्षीय छोरा र ६ वर्षिया छोरीको पनि गोलि हानी हत्या गरेका हुन्, लेफ्टिनेन्ट कर्नेल काम्पापनले एएफपीलाई भने।
बाँकी चार मृत्यहरुमध्ये दुई महिला दुई पुरुष रहेका छन् जो ४७ देखि ७१ वर्षसम्मका रहेका छन्।
उडिरहेको विमान भित्र ४२ बर्षीया महिलाले जुम्ल्याहा छोरीहरु जन्माएपछि…